सुशांत सिंह राजपूतको हत्या कि आत्महत्या ? – Makalukhabar.com
सुशांत सिंह राजपूतको हत्या कि आत्महत्या ?
मकालु खबर	 २०७७ आश्विन २ गते प्रकाशित 253
एजेन्सी । आज सुशांत सिंह राजपूतको मृत्युको रहस्य भिसेरा रिपोर्टले खुलाउन लागेको छ ।
चाँडै एम्स फरेन्सिक्सको टोलीले अभिनेताको मृत्युको कारण खुलाउदै छ । आज सुशांत सिंह राजपूतको रिपोर्ट आउने भएको छ । भिसा रिपोर्ट प्राप्त भएपछि एम्सका डाक्टरहरूको प्यानलले सुशान्तको मृत्युको सत्यतामा अन्तिम बैठक बस्ने भएको छ । सुशांतको भिसेरा र पोस्टमार्टम रिपोर्टको यस बैठकमा छलफल गरिने छ ।
सुशांतको भिसेरा रिपोर्ट
भिसेरा रिपोर्टले स्पष्ट पार्छ । सुशांतलाई विष दिइएको थियो कि थिएन । यस अघि कलिना फरेन्सिक्सले आफ्नो प्रतिवेदनमा भिसा रिपोर्टलाई नकरात्मक देखाएको थियाे । फिर्ता आउने यो रिपोर्टमा अभिनेताको २० प्रतिशत भिसेरा रिपोर्टको अनुसन्धानमा तयार पारिएको छ । किनभने मुम्बई प्रहरीले यसको अनुसन्धानमा ८० प्रतिशत भिसेरा प्रयोग गरेको थियो ।
भिसेरा रिपोर्टले सुशान्तको शरीरमा कुनै विषाक्त पदार्थ रहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने छ । एनसीबी, ईडी, सीबीआईले सुशांतको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, हालसम्म सुशान्तको मृत्युको कारण ति तिनको अनुसन्धानमा खुल्न भने सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा, भिसा रिपोर्टबाट सबैले ठूलो आशा राखेका छन् ।
सुशांतको परिवारले भनेका छन् उसले आत्महत्या गर्नै सक्दैनन् । उसको हत्या भएको हो भनेर परिवारले शंका गरेका छन् । सुशांतका बुबाको एउटा भिडियो पनि बाहिरियो । जहाँ उनले रिया चक्रवर्तीलाई सुशांतको हत्याको जिम्मेवार बताएका छन् । भनेका छन्, रिया मेराे छोराको हत्यारा हो । रियालाई सुशान्तको परिवारले यस मुद्दामा मुख्य अभियुक्त ठहराएका छन् ।
सोलुखुम्बु : भालुको आक्रमणबाट एकको मृत्यु, ४ जना घाइते